Ukukhutshwa kwe-Genomic DNA, ukukhutshwa kwe-plasmid DNA, kunye nokukhutshwa kwe-acid yeicicic kunye nokuhlanjululwa kweesampulu ezahlukeneyo. Ukusebenza okuphezulu kwamanzi okuzenzekelayo ukufezekisa ukusebenza okuphezulu, okufana nemvula yeprotein, ukukhutshwa kolwelo, kunye nokulungiswa kwezicubu zezilwanyana, iibhaktiriya, izityalo, umhlaba, iisampulu zeklinikhi, igwele, njl.
1.The ipleyiti nzulu iqula wenziwe ezinepolypropylene, izinto Polymer kunye ehambelanayo elungileyo yemichiza. Ingasetyenziselwa ukugcinwa kwezisombululo ezininzi ze-organic polar, i-acid kunye nezisombululo zealkaline elebhu.
Ubushushu obuphezulu be-2 kunye noxinzelelo oluphezulu lokucoca inzalo, lunokufakwa kwindawo yokugcina indawo. Yonke ipleyiti ayinalo iqamza, akukho mvumbo, akukho nto yokuvuza. I-Gamma-ray sterilization kunye nokungabikho kwenzalo kukukhetha.
Akukho Akukho DNA kunye neRNA enzymes, akukho mthombo wobushushu. Thobela imigangatho ye-SBS / ANSI yeepipettes ezinemijelo emininzi kunye neendawo zokusebenzela ezizenzekelayo.
Izinto ezisemgangathweni ezine ze-polypropylene, itywina lobushushu elinye, isambuku okanye ezipakishwe kwimiqolo ngetreyi yeblister, Ubungakanani obuncinci, kulula ukuyigcina
5.Sample yokugcina: oko endaweni yesiqhelo 1.5ml icentrifuge ityhubhu ukugcina iisampulu, kwaye zilungiswe kakuhle ukugcina indawo, kunye nomthamo enkulu yokugcina, kwaye ukumelana imeko -80, ifriji. Ke ngoko, ikwabizwa ngokuba yiplate yokugcina.
Ukulungiswa kwesampula: inokusetyenziswa ngokudibeneyo kunye neepayipi ezininzi, iiprosesa eziphezulu zokuhambisa ulwelo kunye nesoftware efanelekileyo ukuvumela ukusebenza okuphezulu kweesampulu zebhayiloji, umzekelo, imvula yeprotein, ukukhutshwa kolwelo, ukukhutshwa kwe-acid ye-acid, njl. Kakhulu ukuphucula ukusebenza processing isampula. Ngaba ukumelana lobushushu eliphezulu
7.Board akukho amaqamza, akukho imivumbo, akukho kuchitheka, amandla ngoomatshini eliphezulu, isebe bond eqinileyo;
I-8.Igcina indawo yokusebenza nangaphezulu, ukuya kuthi ga kwi-1.2 mL okanye kwi-2.2 mL yokugcina ivolumu equleni;
Iiproteni kunye ne-DNA ayizukuhambelana ne-PP, ivumela ukubuyiswa kwesampulu epheleleyo.
Umbala wendalo wenza ukuba kube lula ukufumana uyilo lweenotshi. Sebenzisa: Isebenza kwinkqubo yokuchonga, i-HTS, i-master sampling
kunye nesampulu, isampulu yoomatshini kunye neenkqubo zokuhambisa amanzi ngokuzenzekelayo;
Iipleyiti ezinzulu ezinzulu zingasetyenziselwa ukukhula kweenkcubeko zebacteria okanye ukugcinwa kweekhompawundi.
Iphiramidi-ezantsi inciphisa ukubuyiswa kwesampulu kwaye iphucule ukuxubana ngaphakathi ngokudala isiphumo se-sloshing endaweni ye-vortex
11.xa iphazamisekile, ulwakhiwo lwe-polypropylene lubonelela ngendawo ephantsi yokubopha ukuthintela iisampulu ekuncamatheleni kwiindonga ezisecaleni.
HAYI. Inkcazo Kulungile Umthamo Imilo Ezantsi Ukupakisha / Ctns Inzalo
PC0016 Plate enzulu 96 2.2ml Isikwere U 50 Ukhetho
PC0017 Plate enzulu 96 2.2ml Isikwere U 50 Ukhetho
PC0018 Plate enzulu 96 2.2ml Isikwere V 50 Ukhetho
Ikhompyutha 6 ityhubhu yokuqhawula 6 2.2ml Isikwere U 1500 Ukhetho
Ikhonkco Plate (yokubeka) UKUQALA 2.2ml / / 168 Ukhetho
Ikhompyuter Plate enzulu 96 2.0ml Isikwere U 50 Ukhetho
PC0073 Ipleyiti yokunyibilika 96 0.5ml Isikwere V 100 Ukhetho
PC0076 8 ityhubhu yomtya 8 2.2ml Isikwere V 1500 Ukhetho
Ikhompyutha Plate (yokubeka) UKUQALA 2.2ml / / 168 Ukhetho
Ikhompyutha Plate enzulu 96 2.2ml Isikwere U 50 Ukhetho
Ikhompyutha Plate enzulu 96 1.6ml Isikwere V 80 Ukhetho
Egqithileyo Isitya sePCR
Okulandelayo: Strip-intonga Kama
I-PC0016 2.2ml 96 ipleyiti enzulu entle U ezantsi
PC0017 2.2ml 96 ubunzulu ipleyiti V ezantsi
I-PC0018 2.2ml 96 ipleyiti enzulu entle U ezantsi
I-PC0053 6 ityhubhu yokuqhawula
PC0076 8 umtya ityhubhu V ezantsi
I-PC0084 2.2ml 96 ipleyiti enzulu entle ngaphandle kwesiketi
I-PC0085 1.6ml 96 ipleyiti enzulu entle V ezantsi
I-PC1064 2.0ml 96 ipleyiti enzulu esezantsi U ezantsi